Mujaahidiinta Alshabaab Oo Sheegtay Mas’uuliyada Qaraxyada Xerada Xalane. – Calamada.com
Mujaahidiinta Alshabaab Oo Sheegtay Mas’uuliyada Qaraxyada Xerada Xalane.
calamada July 26, 2016 1 min read
Iyadoo saaka qaraxyo culus oo si aad ah looga maqlay xaafadaha magaalada Muqdisho iyo qeybo ka mid ah duleedka magaalada waxaa soo baxaya warar dheeraad ah oo ku aadan qaraxyadaasi.
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa baahisay qaraxyadaasi oo gaaraya ilaa iyo labo qarax ay ahaayeen camaliyaad Istish-haadi ah oo lala beegsaday xarunta Xalane oo ah saldhiga ugu weyn ciidamada Kufaarta Afrikaanta taasi oo ku taala gudaha garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho.
Calamiyaatka Istish-haadiga ah ayaa lagu weeraray xerada Xalane’iyadoona ay jiraan khasaara nafeet oo ka dhashay labadaasi camaliyadood oo ay fuliyeen labo walaal oo ka tirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya iney dhimasho kor u dhaaftay 20 ruux oo u badan ciidamada Kufaarta AMISOM gaar ahaan kuwa qaabilsan ilaalada xarunta UN-ka ama Qaramada midoobe ee magaalada Muqdisho taasi oo kaabiga ku heysa eleboorka Muqdisho.
Sidoo kale tiro askar iyo saraakii ah oo isugu jira gaalada iyo kuwa dowlada Ridada federaalka ayaa la xaqiijiyay iney dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen camaliyaatka Istish-haadiga ah ee saaka lagu weeraray xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho.
Previous: Qaraxyo Culus Oo Laga Maqlay Magaalada Muqdisho.
Next: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 21-10-1437 Hijri.